"Shaqadaydii Liverpool Waan Gutay Haddana..." - Jordan Henderson Oo Sheegay In Liverpool Uu Gaadhsiiyey Guul, Haddana Uu U Leexanayo Meel Kale - Gool24.Net
“Shaqadaydii Liverpool Waan Gutay Haddana…” – Jordan Henderson Oo Sheegay In Liverpool Uu Gaadhsiiyey Guul, Haddana Uu U Leexanayo Meel Kale
Kabtanka Liverpool ee Jordan Henderson ayaa sheegay in waajibaadkiisii Liverpool ee ahaa inuu guulo gaadhsiiyo uu raadkii ugu horreeyey qaaday oo uu kula guuleystay Champions League iyo Premier League, laakiin uu jiro waajib kale oo saaran oo aanu wali waxba ka qabanin oo ah midkii xulka qarankiisa England.
Jordan Henderson oo qayb ka ah xulka qaranka England ee caawa isku diyaarinaya kulanka UEFA Nations League ee ay iskaga hor imanayaan Belgium, waxa uu qirtay in diiraddiisu u jeeddo dhinaca xulka oo aanu wali waxba kula guuleysan.
Henderson oo bil kaddib u dabbaal-degi doona sannad-guuradiisii tobnaad ee markii uu xulka qaranka England ku biiray ayaa waxa uu sheegay inay muuqato saansaan ay guul ku gaadhi karayaan, bildhaantii ugu weynayd na ay arkeen Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Ruushka.
“Waxay ila tahay inaanu mar kale samaynay horumar tan iyo koobkii adduunka 2018, kumaan jirin xulka qaranka tan iyo bishii March sababtoo ah xanuunka, haddana dib ayaan ugu soo noqday waxaanan dareemayaa in aanu horumar samaynay.” Ayuu yidhi Henderson oo warbaahinta la hadlayay ka hor kulanka Belgium ee caawa.
Jordan Henderson waxa kale oo uu ka halday ciyaartoyda ku cusub xulka qaranka England ee wacdaraha ka dhigay kulankii saaxiibtinimo ee Wales, waxaanu yidhi: “Marka aad daawato iyaga kulankii Wales, waan ka helay sida ay u ciyaareen wiilashu. Waxa iga yaabiyey markii Conor Coady, Ings iyo Dominic Calvert-Lewin ay goolasha dhaliyeen. Dhamaantoodna way u qalmayeen.”